Vola rehetra eto an-tany – FX-Consultante
Ahoana no mba varotra eto amin'ny Financial Markets
Fanontaniana sy Valiny – Trading
Varotra eto amin'ny Financial Markets
Vola rehetra eto an-tany
Ny vola rehetra sy ny fananany tao amin'ny World hita ao Ara-batana $100 Bills – Sary torohay
$100 – Ny ankamaroan'ny fiangonana counterfeited vola eto amin'izao tontolo izao. Be mpampiasa indrindra fitehirizana ny danja eto amin'izao tontolo izao ho an'ny mpivarotra zava-mahadomelina. Mitandrina ny an'izao tontolo izao mihetsiketsika.
Iray alina Dollars
$10,000 – Ampy ho fialan-tsasatra lehibe, na hividy fiara nampiasaina. Eo ho eo amin'ny herintaona eo ho eo ny asa ho an'ny olombelona eto an-tany.
Iray tapitrisa dolara
$1,000,000 – dia ny vola tora-droa teo amin'ny tany.
Zato tapitrisa dolara
$100,000,000 – Be dia be ny handeha manodidina ho an'ny olona rehetra. Mifanaraka tsara anefa ny iray ISO / Miaramila fitsipika salantsalany pallet.
$1,000,000,000 – Izany no fomba iray lavitrisa dolara mitovy. 10 pallets ny $100 faktiora.
Iray tapitrisa tapitrisa dolara
$1,000,000,000,000 – Rehefa manary manodidina ny teny “tapitrisa tapitrisa” toy izany na inona na inona, izany no realit ny $1 tapitrisa tapitrisa dolara. Ny kianja ny pallets ho amin'ny mahitsy $10 lavitrisa dolara. 100X izany ary manana ny tilikambo $1 tapitrisa tapitrisa izay 465 feet lava (142 metatra).
Volamena sy ny volafotsy rehetra fampiasam-bola ao amin'ny World
Demonocacy.info efa natokana lahatsoratra ho an'ny avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra tao amin'ny World. Izany no famintinana fohy ny somary kely volamena sy volafotsy hita eo amin'izao tontolo izao noho ny fampiasam-bola tanjona. Ny tokotokony lanjan'ny volamena fampiasam-bola rehetra ao amin'ny tontolo izao dia $2.5 Tapitrisa tapitrisa USD amin'ny $ 40 / gram na $ 1250 / grama.
Misy volafotsy be kokoa eo amin'izao tontolo izao noho ny volamena, fa noho ny volafotsy dia multiples mora vidy kokoa noho ny volamena (latsaky ny $ 20 / Oz in 2017), be dia be ny vola efa azonay nandritra ny fotoana very. Silver koa ampiasaina amin'ny famokarana indostrialy. Ny habetsahan'ny volafotsy fampiasam-bola natao ho ny vahoaka dia mahagaga kely. World governemanta Tsy manana volafotsy na manan-danja tahirin, Tsy toy ny volamena.
Valo amby roapolo – $28 Tapitrisa tapitrisa ao amin'ny Base Money
Fifty – $50 Tapitrisa tapitrisa in Bank Money
Izany no tena vola dia eto an-tany. Tsy zavatra rehetra izao amin'ny ara-batana na vola (araka ny hita etsy ambony), ny ankamaroany dia dizitaly:
Base ny vola ahitana ny vola natao amin'ny banky (nandray avy amin'ny Central Banks, rehefa nivarotra Banks Corporate Governemanta na famatorana ny Central Banks, ny vola ho an'ny mampisambotra tsy ampy amin'ny sehatra tsy miankina), vola voatahiry ao banky ny vaults (ara-batana vola) ary ny vola ao amin'ny olona ny tanana. Io vola dia tsy azo jerena ao amin'ny ny ATM.
Bank bola dia ahitana ny vola ao amin'ny banky ny voatahiry orinasa sy ny olona, azo fialana na oviana na oviana. Bank nampindrana vola ihany koa avy amin'ny Banky sy ny raharaham-barotra ny olona '. Banks manana piarovana ambany indrindra fitakiana (matetika 10%) fa tsy maintsy foana tanana. Raha nanapa-kevitra ny rehetra ho any amin'ny ATM sy hanaisotra ny zava-drehetra, hisy mihazakazaka eo amin'ny banky.
dimam-polo valo $58 tapitrisa tapitrisa – Sarobidy ny rehetra ny Governemanta famatorana Eran-tany
Izao tontolo izao ny olom-pirenena liana ity mandoa vola be noho ny trosa noforonina araka ny fireneny governemanta.
governemanta Bonds (trosa) dia heverina ho “pananana kilasy” satria Bonds (mpandoa hetra) handoa liana amin'ny nisambo-bola. Mampisambotra mahazo taratasy (The Bond- ny fampanantenana mandoa $$$ indray + mahaliana) ho takalony.
Matetika dia heverina Bonds Governemanta azo antoka ny fampiasam-bola kely mety tsy fandoavam-bola Ny fitondram-panjakana, satria afaka manoratra lalàna vaovao (mitombo & mamorona niniana Hetra) ny hitondra ny vahoaka ny vola an-keriny (in mavesatra iombonana: ara-dalàna halatra). Safidy iray hafa indray ny vola izay tsy toy izany tsara ny mpampiasa vola / lenders dia ny manana ny Federal Reserve “printy” vola vaovao, devalues ​​ny mividy izany herin'ny vola amin'ny alalan'ny vidim-piainana sy ny mpampiasa vola indray mahazo latsaky ny napetrany tao. Izany no matetika ny fomba safidy ho an'ny fitondram-panjakana.
Nahoana no be Governemanta Debt? Satria ny mpanao politika-teny fikasana ho an'ny olom-pirenena ny zavatra azony atao (TSY) afaho, izy ireo izany mba handresy ny fifidianana. Rehefa mandresy izy ireo Politicans nindram-bola mba handoavana ny fampanantenana, mba hitandrina ny teny fikasana. Matetika izy ireo hisambotra ny hampanan-karena ny tenany sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny heloka bevava crony.
Enina ambin'ny folo amby zato $116 tapitrisa tapitrisa – Rehetra amin'ny boloky hazo sy ny Corporate famatorana Eran-tany
Corporate Bonds dia mitovy amin'ny Governemanta Bonds, fa mampidi-doza kokoa. Maro ny orinasa lehibe tsy mety mitondra lavitra noho ny mampisambotra vola ny olona– izany zava-misy mety mampihena ny fankamamiantsika sy mitarika teo mampisambotra zanabola. Big orinasa afaka hisambotra vola somary mora vidy raha oharina amin'ny olona tsy miankina. Indraindray orinasa nindram-bola mba hividianana indray tapa-kazony, ary manosika ny tahiry sarobidy, dia tahaka izany koa ny mpampiasa vola raha karena ara-bola ny orinasa gutting.
Stocks afaka miovaova be amin'ny vidy indrindra, satria ny zava-dehibe kokoa saro-takarina- ny lanjan'izy ireo dia tapa-kevitra ny P / E (Price ny vola) tahan'ny sy ny fandoavam-bola mialoha ny fotoana hitoriana tahiry.
Sivi-folo amby roan-jato $290 tapitrisa tapitrisa – Sarobidy ny rehetra miankina Business sy Real Estate ao amin'ny World
Raha mba te-hividy ny an'izao tontolo izao manontolo, izany no be vola ianao, dia mila.
$180 Tapitrisa tapitrisa ho an'ny Real Estate
$100 Tapitrisa tapitrisa ho an'ny Registered Private Business
$10 Extralegal tapitrisa tapitrisa ho an'ny fikambanana.
Ity antontam-bola manokana dia afaka amin'ny tompony tsy miankina sy ny orinasa tsy miankina amin'ny alalan'ny Kapitalisma.
Kapitalisma demokratika no heverina ho ny ratsy indrindra ny rafitra ara-toekarena alohan'ny naka jereo kely ny safidy. Democratic Kapitalisma dia nasandratry ny nanorenana Ray any USA. Ny sasany miantso ny mpanorina Heroes, Mandritra izany fotoana izany ny sasany miantso azy ireo “Andevo ny tompony izay tsy te handoa hetra ho amin'ny UK”. Safidy ny anao.
Corporate Kapitalisma dia heverina ho ny rafitra lehibe indrindra any Etazonia amin'izao fotoana izao.
Dia haka fitondrana kominista fanaraha-maso ny vola rehetra izany (Business sy ny Real Estate) miorina izay ny governemanta mahafantatra tsara noho ianao hoe aiza no vola ny tahiry, ary ny governemanta dia samy mihazakazaka avokoa, ary raharaham-barotra manana ny Real Estate.
Ny lalana mankany amin'ny helo foana amin'ny fikasana tsara rarivato. Ny adala izay mihevi-mahafantatra fa tsy hoe zavatra mampidi-doza noho ny adala izay mahalala fantany na inona na inona.
One $1 Quadrillion – Sarobidy ny rehetra Sampanteny ao amin'ny World
Izany dia mampiseho ny fitambaran'ny notional ilaina ny rehetra Sampanteny ao Eran-tany (Casino fomba filokana ao amin'ny fifanarahana teny, atao amin'ny banky). Sampanteny dia mampidi-doza mikorontana. An'eritreritra izy ireo fa mbola tena tena. Sampanteny dia Casino fomba filokana ny lanjan'ny na inona na inona izy ireo misafidy ny miloka amin'ny, amin'ny fifanekena iombonana, atao amin'ny banky, overseen ny tsy misy olona (satria tsy misy olona mahalala tsara ny mifamatotra tranonkala & mikorontana ny Sampanteny).
haka “zavatra” -danja, manao filokana eo amin'ny ho avy lanjan'ny “zavatra”, hametraka fifanarahana & manana derivative. Banks ho tombony lehibe eo amin'ny Sampanteny, ary rehefa mety ny fefy ranolava ny mpandoa hetra dia hiafara amin'ny volavolan-dalàna. Izany visualizes fandrakofana ny tanteraka ho an'ny Sampanteny (notional). Mitovy amin'ny orinasa fiantohana ny fandrakofam-baovao tanteraka ho an'ny fiara rehetra (Tsy midika anefa ny fiantohana ny fiara rehetra dia ho vola avy niara-).
Indraindray Banks ho tena ny fanafoanana derivative fifanarahana. ohatra: 2Banks X miditra 2x Contracts:
Contract1 = Bank1 mandoa $ 10m ny Bank2 raha vidiny miakatra
Contract2 = Bank2 mandoa $ 10m ny Bank1 raha vidiny miakatra.
Izany 1000x ary avy eo izy ireo handeha mirehareha amin'izy samy izy ny momba ny haben'ny ny derivative portfolio-.
Tsy misy afaka tena manara-maso izay ahazoan'ny ny zavatra izay ao Sampanteny, Tena mikorontana be mampikorontan-tsaina, mampilaza fa ny hetsika toy ny Fed Chairwoman Janet Yellen tampoka mitaiza zanabola ny 5% dia tena azo inoana fa ny rehetra dia mitambotsotra derivative System sy ny Banks miaraka izay, satria ravahan'ny daomy banky vokatry ary ny sasany mety ho manana tanana amin'ny ratsy derivative filokana sy bankirompitra.
Misy adala (angamba banky iray hafa) mety ihany ny banky bankirompitra ny boloky hazo sy ny fananany, ary koa miatrika Tsy niraharaha. Izany no mahatonga ny fahaverezan'ny matoky ny banky sy ny olon-drehetra dia manomboka manongotra ny vola azo antoka mpiambina azy, niteraka ravahan'ny vokatry ny banky insolvency.
$1 Quadrillion = $1000 tapitrisa tapitrisany = $1 Million an'arivony tapitrisa na $1 An-tapitrisany Billion
The Liquidity Piramida
Ny Liquidity Piramida noforonina noho ny fijerena ny fandaminana ny kilasy-pananana eo amin'ny lafiny mety sy ny habe. Ny Liquidity Piramida noforonina nandritra ny fotoana ao amin'ny United States, rehefa dolara tsirairay dia tohanan'ny Volamena. Volamena tsy ampy ny kely fototry ny zava-dehibe azo itokisana indrindra, sy ny fampianarana ao amin'ny tsikelikely pananana ambony sehatra mampidi-doza kokoa. Ny lehibe kokoa pananana haben'ny kilasy amin'ny ambaratonga ambony dia ambony solontenan'ny tanteraka eran-tany ireo notional lanjan'ny fananana.
Araka ny mety mitombo ara-bola, vola mitady hifindra avy amin'ny fananan'ny mampidi-doza kokoa (Sampanteny), ny kely indrindra fananan'ny mampidi-doza (ny ara-batana, ary avy eo volamena vola). Tsy misy zavatra tsy misy atahorana, fa atahorana ny havana. Ny olana dia ny hoe misy firy vola ara-batana ary na dia tsy Volamena raha oharina amin'ny fananan'ny mampidi-doza kokoa, Manao izany ho feno olona varotra amin'ny fotoam-atahorana ny olon-drehetra te-hitsambikina ho vola sy ny volamena, nanosika ny vidiny.
Ny kely mavo mahitsi- amin'ny ankavia anoloan'ny dia ny volamena rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny endrika ara-batana. Ny volamena rehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy ny rehetra amin'ny “fampiasam-bola ara-bola kilasy” teny.
The $1 Quadrillion Sampanteny vola rindrina manjavona any an-lavitra, satria $1 Quadrillion dia tombany avy ny tsara indrindra sy ny fahamarinana mpandalina dia tsy misy tena mahafantatra ny tena habeny ny Dérivés Market.
Tanteraka am-boalohany amin'ny teny Anglisy eto: demonocracy.info
User mpitari-dalana ho an'ny beginners in forex varotra
Isan-karazany mimari-droa Options